Izindaba - Isimame kanjani imboni kabhiya? Bheka imigoqo yokuqhubeka yala mazwe
Amabhawa nezindawo zokudlela zivulwe ngokulandelana, kuhambisana nokuvuselelwa komnotho wasebusuku kanye nomnotho ochumayo wezitebele zomgwaqo, imakethe kabhiya wasekhaya ikhombise umfutho omuhle wokululama. Ngakho-ke, kuthiwani ngozakwethu bangaphandle? Izindawo zokupheka ubuciko zaseMelika ezazikhathazekile ngokungakwazi ukuqhubeka ziphila, imigoqo yaseYurophu exhaswa ngamavawusha okuphuza, nezinye izindawo zokupheka utshwala. Ngabe balungile manje?
I-United Kingdom: Indawo yokucima ukoma izovulwa ngoJulayi 4 ekuqaleni kwesikhathi
UNobhala Wezohwebo waseBrithani uSharma uthe ukuvulwa kwamabhawa nezindawo zokudlela "ekuqaleni" kuzodingeka kulinde kuze kube nguJulayi 4. Ngenxa yalokhu, izinkantini zaseBrithani zalo nyaka zizovalwa isikhathi esingaphezu kwamahora ebhizinisi.
Kodwa-ke, emasontweni adlule, imigoqo eminingi e-UK inikela ngobhiya wokuthatha, odume kakhulu kubaphuzi. Abathandi abaningi bakabhiya bajabulele ubhiya wokuqala we-pub ezinyangeni zomgwaqo.
Amabha akwamanye amazwe aseYurophu nawo ayavula noma asezovulwa futhi. Phambilini izinkampani eziningi zikabhiya zakhuthaza abathandi bakabhiya ukuthi bathenge ama-voucha kusengaphambili ukuxhasa imigoqo evaliwe okwesikhashana. Manje, lapho la mabha evuleka, amabhodlela afinyelela ku-1 wesigidi kabhiya wamahhala noma okhokhelwa kusengaphambili ulinde abaphuzi ukufika.
E-Australia: Abathengisi bewayini bafuna kumiswe ukwenyuka kwentela yotshwala
Ngokwemibiko yabezindaba zakwamanye amazwe, abakhiqizi bakabhiya, iwayini kanye nemimoya, e-Australia ngokuhlanganyela baphakamise ukuthi uhulumeni wesifundazwe akumise ukwenyuswa kwentela yotshwala.
UBrett Heffernan, isikhulu esiphezulu se-Australia Brewers Association, ukholelwa ukuthi manje akusona isikhathi sokukhuphula intela yokusetshenziswa. "Ukunyuka kwentela kabhiya kuzoba ngomunye umonakalo kumakhasimende nakubanikazi bamabhawa."
Ngokusho kwe-Australian Alcoholic Beverage Company, ukuthengiswa kweziphuzo ezidakayo e-Australia kwehle kakhulu ngenxa yomthelela wobhadane lomqhele omusha. Ngo-Ephreli, ukuthengiswa kwebhiya kwehle ngama-44% unyaka nonyaka, kanti ukuthengisa kwehla ngama-55% unyaka nonyaka. NgoMeyi, ukuthengiswa kukabhiya kwehle ngo-19% unyaka nonyaka, kanti ukuthengisa kwehla ngama-26% unyaka nonyaka.
I-United States: Ama-80% wabaphisi bezobuciko athola uxhaso lwe-PPP
Ngokuya ngocwaningo lwakamuva olwenziwe yi-American Brewers Association (BA) ngomthelela wesifo esiwumshayabhuqe ezindaweni zokuphuza utshwala, ngaphezu kuka-80% wabaphisi bokwenza ubuciko bathi bathole uxhaso ngohlelo lwePayroll Protection Program (PPP), olubenza bazethembe kakhudlwana. mayelana nekusasa. ukuzethemba.
Esinye isizathu sokwanda kwethemba lokuthi amazwe ase-US aseqalile ukuvula amabhizinisi, futhi ezifundazweni eziningi, izindawo zokuphisa utshwala zibalwe ohlwini lwemisebenzi eyayivunyelwe phambilini.
Kepha ukuthengiswa kwabapheki abaningi bakabhiya kwehlile, kanti ingxenye yabo yehle ngama-50% noma ngaphezulu. Ebhekene nalezi zinselelo, ngaphezu kokufaka izicelo zemalimboleko yohlelo lwamaholo, abakhiqizi bebhiya banciphisa nezindleko ngangokunokwenzeka.